Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Sintomy ny Adobe Illustrator CS6
Sintomy ny Adobe Illustrator CS6
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2022-06-09, Malagasy Blog
Mitady rohy fisintomana Adobe Illustrator CS6? Ankehitriny dia misy ho an'ny rehetra ao amin'ny tranonkala ofisialin'ny orinasa. Matetika, ny programa dia ampiasain'ny mpamorona sary, izay mankasitraka interface tsara ary te hampiasa fitaovana tsara indrindra avy amin'ny orinasa Adobe fanta-daza. Amin'ity lahatsoratra ity dia holazaiko aminao ny fomba fampiasana ara-dalàna sy tsara ny programa. Ary koa, hatoroko ny tombony lehibe amin'ny Adobe Illustrator CS6.
Sintomy ny ILLUSTRATOR CS6
Asa haingana sy fitoniana . Miaraka amin'ny Adobe Illustrator CS6 misintona kinova feno, azonao atao ny manatanteraka ireo asa sarotra indrindra sy haingana ary mahomby. Miaraka amin'ny rafitra mandroso Mercury Performance izay manohana computing 64-bit ho an'ny Mac OS sy Windows, azonao atao ny manao ny ankamaroan'ny fiasa mahasoa izay tsy nisy tamin'ny kinovan'ny programa teo aloha. Ohatra, azo atao ny manokatra, mamonjy, manondrana rakitra be dia be ary mizaha ireo tetikasanao.
Ampitomboy ny vokatrao ary ampiasao ny endri-javatra tianao indrindra . Ny interface maoderina sy intuitive an'ny Illustrator CS6 dia ahafahanao miasa mahomby kokoa. Ankehitriny dia nanjary nahitsy kokoa ny fizotran'ny asa. Na hampiasa ny Panel tontonana ianao mba hanoratanao tsara ny loko na ahafahanao fanitsiana ny anaran'ny sosona, azonao atao izany tsy misy manahirana. Ary koa azo atao ny manamboatra ny famirapiratan'ny sehatr'asa arak'izay ilainao.
Mahazoa bebe kokoa fampahalalana momba ny Solon'ny Adobe Illustrator.
Mahazoa fanaraha-maso feno momba ny tetikasanao . Raha misintona ny Adobe Illustrator CS6 ianao dia afaka maneho ny fahaizanao mamorona amin'ny endriny mandroso amin'ny programa. Ankehitriny dia lasa tsio-drivotra ny famolavolana sy fanovana ireo sanganasao. Ny motera vaovao manara-penitra vaovao ao amin'ny Illustrator CS6 dia ahafahanao mamorona sary vector marina rehefa mifehy ny dingana rehetra. Azo atao koa ny manampy gradient amin'ny lalan-drà.
Jereo hoe ahoana ny mividy Adobe Illustrator tombony.
Mahavita miasa miaraka amina rakitra lehibe kokoa . Na mampiasa Adobe Illustrator CS6 Mac na Windows ianao, dia azonao atao ny miasa miaraka amina rakitra marobe marobe miaraka. Noho izany, azo atao ny manalavitra ny hadisoana ivelan'ny fitadidiana. Ary koa, ny mpamorona dia nanatsara ny endri-javatra toy ny famoronana endrika fonosana, sarimiaina ary sary lehibe.
HiDPI fanohanana . Mba hanararaotana tsara ny manara-maso ny fanovana sary , manana fanohanana avy amin'ny teratany ho an'ny fampisehoana avo lenta ny Illustrator. Azonao atao ny manandrana an'ity endri-javatra ity raha mampiasa Mac OS, ohatra, ny fisehoan'ny MacBook Pro miaraka amin'i Retina. Noho izany, azonao atao ny miasa miaraka amin'ireo singa UI maranitra sy mazava ary mankafy ny fahazavan'ny sary kely ao amin'ireo takelaka.
Hamaky bebe kokoa momba ny ny fomba hahazoana Adobe Illustrator maimaim-poana.
Fepetran'ny rafitra Adobe Illustrator CS6
Toy ny rindrambaiko Adobe maimaimpoana, Illustrator dia tsy manana takiana amin'ny rafitra avo. Azonao atao ny mametraka ity programa ity na dia amin'ny solosaina malemy aza. Aza misalasala ary mividy Adobe Illustrator.
Adobe Illustrator CS6 ho an'ny Windows
processeur Mpandrindra Multicore Intel (miaraka amina tohana 32/64-kely) na mpikirakira AMD Athlon 64
Rafitra fikirakirana Microsoft Windows 7 miaraka amin'ny Service Pack 1, Windows 10 *
ram RAM 2 GB (soso-kevitra 4 GB) ho an'ny 32 bit; RAM 4 GB (tolo-kevitra 16 GB) ho an'ny 64 bit
Hard disk 2 GB habaka kapila mafy maimaimpoana; mitaky toerana malalaka fanampiny mandritra ny fametrahana; Soso-kevitra SSD
Fanapahan-kevitra Resolution 1024 x 768 monitor (tolo-kevitra 1920 x 1080) Raha hampiasa workspace Touch dia tsy maintsy manana fitaovana azo ampiasana na Windows 10 monitor ianao (Microsoft Surface Pro 3 Recommended).
Sintomy ho an'ny WINDOWS
Adobe Illustrator CS6 ho an'ny Mac
processeur Mpandrindra Multicore Intel® miaraka amina tohana 64-bit
Rafitra fikirakirana Mac OS X v10.6.8 na v10.7
ram RAM 2GB (soso-kevitra 8GB)
Fanapahan-kevitra 1024 x 768 vahaolana amin'ny monitor (1920 x 1080 Recommended)
Sintomy ho an'ny MAC
Mba hahomby kokoa amin'ny asanao ao amin'ny Adobe Illustrator, dia nanomana fonosana fonosana maimaimpoana manokana aho. Ity fanangonana ity dia mety amin'ny karazana sary, karatra fandraharahana, fitaovana marketing ary logo isan-karazany.
Package fonosana maimaim-poana
Fampidinana Adobe Illustrator CS6
Fepetra takiana amin'ny rafitra
Sintomy ny Adobe Illustrator CS6 Free
Adobe After Effects CS6 Soratra
Maimaimpoana ny Adobe Portfolio [Version Malagasy]
Ahoana ny fomba ahazoana Adobe After Effects maimaim-poana [Version Malagasy]
Ahoana ny Fomba Ahazoana Maimaim-Poana Adobe Illustrator
Adobe PDF maimaim-poana
Ahoana ny fomba ahazoana Adobe Premiere Pro maimaim-poana
Adobe Audition Maimaim-Poana